Hevitra MPANOHARIANA | Novambra 2007 |
2007-11-30 @ 09:36 in Andavanandro
Misy ilay hiran'i Jerome Randria izay nanana ny lazany tamin'izany fotoana mitondra ny lohateny hoe Alina Paris, asa mety ho valin'ny hiran'ny Joe Dassin manao hoe "aux champs élysées" ihany koa angamba. Tsy hampitaha velively ireny toerana ireny amin'izay ananantsika fa dia mba mamoaka ny sarin'Analakely amin'ny alina aho, zoma mahafinaritra koa angamba androany dia mba mijery ny alina any indray e! Tsy hijery ireo entana amidy ao loatra isika fa ny zava-boary ao aminy izay voakarakara aloha no mba itodihana kely e!
Indreo hitantsika aloha ny satrana eo afovoan'ny zaridaina izay misy milaza fa tsy ela velona aty amin'ny lemaka ambonin'i Madagasikara izany, hafana dia hafana izany ny fikarakarana ireo.
Vokatra tiko hafa kely
2007-11-29 @ 11:12 in Ankapobeny
Tsy misy resaka fampiesonana velively. Tsy fantatro koa na efa namoaka ny gazety na tsia fa dia ampiarahako amin’ny sary mihitsy ny ahy aloha. Tahaka ny hoe niova filamatra indray ny orinasa tantanin’ny fianakaviana Ravalomanana amin’izao fotoana izao. Raha olona tsy manaraka na inona na inona mihitsy dia hihevitra fa tena manaraka ireo teny ifanomezana anaty madagasikara amperinasa tokoa ny orinasa tiko. Kisendrasendra vitsivitsy anefa no mametraka fa fifidianana mihitsy no tiany avoitra.
Ikotofetsy sy Imahaka niady tsodranondRanakombe
2007-11-24 @ 10:50 in Politika
Ataoko fa efa nahenoheno kely ny momba ny anganon’Ikotofetsy sy Imahakà daholo isika. Ary ankoatra izay dia mety ho efa fandrentsika amin’ny angano malagasy maro hafa izany anarana Ranakombe izany. Any no fitarain’ny olona maro manana olana. Betsaka ny zavatra omen-dRanakombe tahaka ny fanafody, torohevitra maro isankarazany. Noho ny toerana misy azy dia hajain’ny olona fatratra Ranakombe sy ny fianakaviany. Tsapan’Ikotofetsy sy Imahaka indrindra izany ka dia samy nanana ny paikany indray izy mirahalahy.
Ikotofetsy sy Imahaka koa hirotsaka hofidiana
2007-11-23 @ 06:39 in Politika
Miomana fatratra amin’ny fifidianana ho Ben’ny tanàna ny eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Dia nahatsiaro Ikakimpitantara fa nisy angano miresaka fifidianana ho Ben’ny tanàna indrindra tsaroany ka mba hozarainy tamiko. Tsy tiako ho izaho irery no handre ilay tantara fa dia nosoratako mihitsy ilay izy mba ho an’ny fara aman-dimby ihany koa. Indray maka izay, hono, ry zareo dia hifaninana izay ho Ben’ny tanàna tao amin’ny tanàna lehibe antsoina hoe Vohitsara i Ikotofetsy sy Imahakà. Olona mifankafantatra tsara ry zareo ary tsy mifanalavitra loatra ny taonany. Toerana ho an’ny olona iray ihany manko no iadiana ka izay no mampifandrafy azy mirahalahy ireto tamin’ity indray mitoraka ity. Jereo amin’izay ange ny paika ataon’ny tsirairay hifidianan’ny olona azy e!
Lycee Ambohimanarina tale nanaboridana mpianatra maro
2007-11-21 @ 16:01 in Ankapobeny
Tsy dia fanaoko loatra ny lohateny sahala amin’izao saingy misy ihany ny fotoana tsy maintsy miresaka azy. Ity tranga ity manko dia tsy mitovy loatra amin’izay famoakan’ny gazety nefa ahiana ho lasa fomba fanaon’ny sasany indray. Tranga eto Antananarivo renivohitra amin’ny sekolim-panjakana ka singanina kely hanairana ny tompon’andraikitra mahefa.
Mpanompo sampy ve Ravalomanana?
2007-11-20 @ 17:06 in Finoana
Somary nahoraka ihany koa tamin’ny faran’ny herinandro teo ny nametrahan’Atoa Ravalomanana filohampirenena Malagasy ny vato fehizoron’ny tranombakoka kasaina apetraka mifanila amin’ny trano fiasan’ny filoham-pirenena eo Ambohitsorohitra sy amin’ny faritra manasaraka azy amin’ny trano lehibe an’ny Banky Foiben’I Madagasikara. Trano natao hanana endrika trano gasy mahazatra eto amin’ny faritr’Imerina kasaina hovitaina haingana satria mbola ho ela vao ho vita ny fanarenana tanteraka ny Rovan’i Manjakamiadana. Tsy dia ny fikasana hanangana ny trano loatra no nampahoraka azy ity fa izay natao tamin’io andro io. Fa inona avy no nataony ka hita tamin’ny haino aman-jery?
Tsy misy mpandimby no tanjona
2007-11-13 @ 07:08 in Kolontsaina
Aretina mpahazo ny manam-pahaizana aty amin’ny tany mahantra angaha ity soratako etoana ity. Ny mpitondra fanjakana dia mifofotra mafy mba tsy hisy olona ho afaka mandimby azy fa raha misy manko izany dia loza mananontanona ho azy ny fiheverany iny olona iny. Tsy ny mpitondra fanjakana ihany anefa no mpanao izany fa hatrany amin’ny fampianarana ambony iray miankina amin’ny fanjakana etoan-toerana mihitsy.
Toy ny rafitra efa mipetraka hanakanana ny tanora tsy hivoatra ka hanana mari-pahaizana ambony noho izy no resahina eto. Efa mandeha moa fihodinana faharoa amin’ny taona voalohany ao amin’ny sekoly iray (tsy tiako hotononina aloha) ao Ankatso ao. Isan-taona ny salanisam-pahafahana tamin’io sekoly (faculté) io dia 10 amin’ny 20 ka eo ho eo amin’ny 100 no afaka amin’ny fihodinana voalohany ary eo ho eo (izany hoe manodidina ny) 50 kosa no afaka amin’ny fihodinana faharoa. Taona voalohany io, rehefa mandeha indray ny fanadinana hifindrana kilasy taona faharoa dia mihena ho 50 any ho any indray sisa no raisina hiakatra kilasy. Any amin’ny kilasy ambonimbony any dia zara raha misy 7 na latsak’izany aza sisa no hanohana ny fikarohany. Misy aza “famatsiam-batsy” (nahatratra fito tamin’ity taona ity) avy amin’ny fanaovana fanohanana fikarohana no tsy nisy mpandray intsony satria tsy nisy mpianatra tafakatra hatrany intsony. Io famatsiam-batsy io moa dia misy fandefasana ny mpianatra hianatra any ivelany mihitsy (Canada, US,…) saingy lasa ny mpampianatra indray no manao ilay fikarohana toy ireny hoe izy indray no mpianatra hanala fanadinana.
Io sekoly io dia tsy fanadinana no hidirana ao ka hoe 100 no tafiditra eo amin’ny taona voalohany dia tonga hatrany amin’ny farany avokoa izy 100 ireo na ny latsaka kelin’izay fa efa ifanarahana mihitsy hoe tokony ho izao sisa ianareo rhefa toonga amin’ny taona fahaizao. Amiko karazana fitaka ihany ilay izy satria efa tonga any ambonimbony any ianao dia mety ho araraka fotsiny satria efa feno ny isan’ny olona tsara naoty kokoa noho ianao dia voatery mamerina kilasy ianao raha mbola mazoto hahaizanao bebe kokoa, amin’izay fotoana izay anefa dia na mihena be ny vatsy azonao na mety tsy hahazo intsony aza ianao. Eto indray aho dia hiverina hiresaka amin’izay saiky hosoratako.
Eo ho eo amin’ny 100 no afaka fihodinana voalohany ary 50 kosa no afaka fihodinana faharoa amin’ny ankapobeny isan-taona, hoy aho tetsy ambony. Tamin’ity indray mandeha ity satria nianatra be ny ankizy dia 150 ny isan’ny ankizy tokony ho afa-panadinana fihodinana voalohany avy hatrany. Raha ny tokony ho izy izany, satria efa voafetra ho 150 ny isan’ny mpianatra raisina hianatra taoona faharoa dia tsy tokony ho nisy intsony io fihodinana faharoa io dia novana ny fanapahan-kevitra. Tsy izay mahazo ny salanisam-pahafahana no afaka fa ireo 100 voalohany ihany. Ny ankoatra izay dia mamerina fanadinana avokoa izay tokony hamerina. Eo no tena mahavariana. Ity tokoa no tonga amin’ilay teny hoe Antonoara (tsy haiko ny fanoratra azy amin’ny teny frantsay) politikam-panasivanana ny mpianatra malaza ho ataon’ny Oniversite eto Madagasikara fa mbola mitohy hatramin’izao. Eo no tsy mazava amin’ilay hoe Fakiolitey eto, misy famerana mpianatra tahaka izany angaha moa izy ity? Concours isantaona izany no banjinin’ny mpianatra ato amin’ity sekoly ity? Itarainana mandrakariva ny tsy fahampian’ny mpampianatra nefa toa ny fomba mihitsy no manao izay tsy hisian’ny mpandimby. Ry taranaka ô! Raha tahaka izao, ka manana fahafaha-manao ianao mandehana mianatra any ivelan’I Madagasikara aloha.
Matematika vaovao noho ny hetra
2007-11-12 @ 07:29 in Toekarena
Rehefa tsorina indray ny kajikajy amin’ity resaka hetra vaovao kasaina hotanterahina manomboka amin’ny voalohan’ny taona 2008 iny vao mahita sampona tampoka eny ihany. Mpikarama ny tena ka tsy maintsy mijery an’izay mihatra amin’ny mpikarama amin’ity resaka hetra ity. Ny tena mampalahelo ny maro amin’ny mpiasa dia izay anaty rafitra mandoa hetra hatrany no ataon’ny fanjakana mangana amin’ity tsy maintsy mandoa vola ity. Ny tsy anaty rafitra kosa betsaka no mandray vola betsaka noho ny anaty rafitra saingy tsy miraika ny handoa mihitsy rehefa fanentanana fotsiny no atao fa tsy misy tena fanerena ny olona rehetra handoa. (Marihina fa tsy mbola nahita ny famoahan-kevitra aho tamin’ny nandrafetana ity lahatsoratra ity).
Depiote o! ahoana ianareo aminâ€™ireto?
Mamely ny tenany ny PDS Antananarivo
2007-11-03 @ 10:37 in Politika
Maneho ny tahony indray ny solotenam-panjakana eto Antananarivo Renivohitra ka mihoa-pahefana (fandisoam-pitenenana ny teny hoe fanamparam-pahefana satria afaka manampatra ny zoko tanteraka aho raha ara-dalàna izany) omaly zoma.
Tantara marina hita tamin’ny fahitalavitra teto an-toerana no vahavahako kely eto ary momba ny fandraharahana madinika sy salantsalany no horesahina. (tohiny)
Mifety ny ankizy
2007-11-01 @ 15:58 in Spaoro
Marina fa fety ihany ny andron’ny omaly any amin’ny ankamaroan’ny firenena tandrefana saingy tsy iny akory no resahina eto. Tsy Halloween na Fetin’ny Olomasina na Andron’ny Reformasiona no resahina eto fa ny Kids Games izay tontosaina eto Antananarivo amin’izao fotoana izao. (tohiny)